Vaovao - Inona no hatao raha mihena ny fahombiazan'ny milina fanaovana carton
Ny masinin-tsarety dia milina manana fahombiazana sy kalitao tena tsara. Ny fampiasana tsy ara-dalàna, ny tsy fikojakojana ara-potoana sns sns dia antony na fitaomana tsy ahafahan'ny milina fanaovana cartonement mandeha ara-dalàna. Mba hahafahana mampandeha maharitra ny milina fanaovana cartonite mandritra ny fotoana maharitra dia ilaina ny manamafy ny fikojakojana azy.
Rehefa mampiasa ity karazana milina fanaovana carton ity dia matetika tsy mahomby ny fahombiazan'ny asa noho ny fandidiana tsy mety. Androany, tiako ny mampahafantatra anao ny fomba fampiasana ny milina fanaovana carton.
1. Alohan'ny hampiasana azy dia tsy maintsy manao fiomanana mifandraika ny tsirairay. Hamarino raha efa nalamina sy namboarina araka ny tokony ho izy ny fitaovana fiarovana rehetra, ary zahao ihany koa raha toa ny habetsaky ny diloilo fanosorana sy ny tsindry ataon'ny rivotra ao anatin'ny faritra voafaritra.
2. Ampidino ny herinaratra, akatona ny boaty mandeha ho azy ao anaty boaty elektrika, alefaso ny efijery fanokafana, asehoy ny efijery voalohany, kitiho moramora ny teboka rehetra eo amin'ny efijery voalohany, kitiho ny efijery hidiranao ny interface fifantina fiteny, tsindrio kely raha hampiasa ny fiteny hiditra ny interface interface.
3. Tsindrio ny bokotra paompy menaka ary ampio menaka manosotra mandritra ny 10 segondra. Ianao koa dia mila mamoaka ny handwheel ary ahodina mandritra ny 3 ka hatramin'ny 4 tsingerina miasa araka ny fitarihan'ny masinina. Tandremo ny fiasan'ny ampahany tsirairay, ary avy eo apetraho ny boaty taratasy sy ny tabilao fitsaboana, Manual, ahodino ny kodiarana tanana ary araho ny fiasan'ny masinina. Tandremo ny fiasan'ny singa tsirairay amin'izao fotoana izao, ary ampifanaraho amin'ny fotoana ilaina izany.